BVC 2-8 veckor - andra språk - 1177
Hälsobesök på BVC vid 2-8 veckor - somaliska
Hälsobesök på BVC vid 2-8 veckor - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Waxaa kulamadaas lagaga hadli doonaa arimaha ku saabsan ilmaha, iyo macnaha ay leedahay in waalidnimadu, waxaa kale oo la tix raaco waxyaabahii laga wadahaley kulankii kan ka horeeyey. Sidoo kale Imaha waa la baadhi doonaa, la miisaami doonaa isla markaana waa la cabiri doonaa.
Waxaa kulankaas ilmaha lagu sameyn doonaa baadhitaan isla la markaana waxaa aad heli doontaa fursad aad kaga hadasho xaaalda caafimaad ee ilmaha isla markaana aad su’aalo ayaad weydiin kartaa.
Marka uu ilmuhu jiro 6 todobaad waxaa lagu marti qaadi doonaa talaalkii koobaad, kaas oo lid ku ah feyuska lagu magacaabo rota (rotavirus). Talaalku waa mid dhibco ah oo afka laga qaato, waana mid dhadhankiisu macaanyahay.
Marka uu ilmuhu jiro 6-8 todobaad waxaa lagu marti qaadi doonaa hooyada dhashey ilmaha kulan wadahadal oo la yeelan doonto kalkaalisada caafimaadka, waxaa kulankaas lagaga hadli doonaa arimo ku saabsan sida ay tahay xaalada caafimaad ee hooyada uurka iyo dhalmada ka dib. Haddii ay jirto baahi loo qabo in wadahadal lala yeesho kalkaalisada caafimaadka ama dhkhtarka maanka (psyklog) waa lagu marti qaadi doonaa hooyada. Dhamaan carruurta oo dhan waxaa ay xaq u leeyihiin in ay ku koraan nolol ay ka reebantahay dil xagga jidhka, mid xagga maskaxda ah iyo kufsi, sidaa aawadeed waxaa waalidiinta lagu weydiin doonaa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC su’aalo ku saabsan dilka.
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsna rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsna xuquuda carruurta ee ah in ay ku koraan nolol ay ka reebantahay dil xagga jidhka, mid xagga maskaxda ah iyo kufsi (svenska)